Ungafaka igalelo dbf igama lefayile ngqo okanye ucofe i iqhosha lokukhangela kwaye ukhethe ifayile. Unokucofa kwakhona iqhosha lokufumana dbf ifayile izakulungiswa kwikhompyuter yendawo.
Kwibhokisi yokudibanisa Unokukhetha ifomati yomthombo dbf ifayile. Okwangoku ezi fomati zilandelayo ziyaxhaswa:
nqakraza i iqhosha, kwaye DataNumen DBF Repair Ndiza start ukuskena nokulungisa imvelaphi dbf ifayile. Inkqubela phambili yebha